Fiangarana amin'ny fanampiana :: Hofaizina mafy ireo sefo fokontany manaotao foana • AoRaha
Fiangarana amin’ny fanampiana Hofaizina mafy ireo sefo fokontany manaotao foana
Hihatra amin’ireo sefo fokontany tratra manararao-pahefana sady manao mizana tsindrian’ ila amin’ny fitsinjarana ny fanampiana ho an’ny vahoaka ny famaizana amin’ny alalan’ ny sazy, ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Tamin’ny fomba hentitra no nilazan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, teny Itaosy, omaly fa: “sazy faran’izay henjana no hampiharina amin’izy ireo”.
“Hoesorina eo amin’ny toerany koa ireo sefo fokontany manao kolikoly. Tsy azo ekena ny fanodinkodinana ny fanampiana ka hofaizina mafy izay manao izany”, hoy izy nanoloana an’ireo olona nitaraina taminy, teny an-toerana.
Tsy namelan’ireo mponina teny Bemasoandro Itaosy mihitsy ny Filoha raha tsy naheno ny fitarainan’izy ireo. Nisy ny sakana nataon’ireo andian’olona teo amin’ny arabe mihazo ny Taninkatsaka mba hahafahan’ireo olona maro nanao tatitra ny alahelony tamin’ny Filoha. Tranga notaterin’ireo mponina teny an-toerana ny voalaza fa fanaovan’ireo lehiben’ny fokontany kiantranoantrano amin’ny fisokajiana an’ireo olona misitraka ny vatsy tsinjo. Eo ihany koa ny voalaza fa “fitakiana vola” amin’ireo olona te hahazo ny fanampiana avy amin’ny fanjakana.
“Tsy maintsy tonga eto aho miresaka aminareo, satria, sarobidy amiko izany fitsinjovana ny Malagasy izany. Manome toky aho fa tsy misy olona hailika izany fa tsy maintsy mahazo fanampiana daholo”, hoy ny Filoha Rajoelina Andry. Ity farany izay nanome baiko an’ ireo olom-boafidy eny amin’ity distrikan’Antsimondrano ity mba hanara-maso sy hiandraikitra ny fizaràna ny fanampiana ho an’ireo mponina marefo amin’izao krizy ara-pahasalamana izao. Novakian’ny Filohan’ ny Repoblika bantsilana fa: “maro be ny tatitra azony momba ny fisiana fanodinkodinana ny vatsy tsinjo isam-pokontany”. “Vary iray kitapo sy menaka 2 litatra ary voamaina no homena anareo ka tsy tokony hisy hanimbinana izany”, hoy izy.
Fandaminana eto Iarivo
Fokontany maromaro teto Antananarivo renivohitra no nitrangana savorovoro hatramin’ ny fiantombohan’ny fizaràna ny fanampiana avy amin’ ny fanjakana.
Hisorohana an’izany dia nanapa-kevitra ny hamory ireo sefo fokontany roa amby sivifolo amby zato eto Antananarivo renivohitra ny Ben’ny tanàna, Andriantsitohaina Naina, anio maraina. « Hamafisina ny lamina rehetra momba ny fizarana ny fanampiana. Misy ny efa mizotra araka ny tokony ho izy ary misy koa ireo mila arindra mba tsy hisian’ny olana », hoy i Solofoniaina Michael, talen’ny kabinetra lefitry ny kaominina Antananarivo renivohitra, omaly.
Fitoriana-Fifidianana ben’ny tanàna Hatao alohan’ny novambra ny famoahana an’ireo didy rehetra
Fanararaotana tsingerin-taona :: Voatilin’ny mpitandro filaminana ireo mpikotrika korontana
Fandaminana tanàna :: Voakasiky ny fandravana ireo tsena etsy amin’ny Esplanade